Ihe ngosi Galaxy Galaxy 10 gafere ule ntachi obi nke JerryRigEverything | Gam akporosis
Ihe ngosi 10 dị na Galaxy na-anwale ule ntachi obi kachasị ama
Edere Ferreno | | Mobiles, Samsung
Izu abụọ gara aga ka ewepụtara 10 Galaxy Note, Samsung ọhụrụ elu-ọgwụgwụ. Dị Korea na-ahapụ anyị na ekwentị ya zuru oke ugbu a. Ndị ahịa na-egosi na ha na-azaghachi nke ọma, dịka ọnụ ọgụgụ ndị na-echekwa gafere nke ọgbọ gara aga. Ya mere, ọ bụ oge dị mma maka ekwentị ịgafe ule ntachi obi kachasị ama na ahịa.
Ihe ngosi 10 nke Galaxy gafere ule ntachi obi nke JerryRigEverything, nke kacha mara amara taa na mpaghara a. Ya mere, anyị nwere ike ịhụ otu ọhụụ Samsung ọhụụ si anwale ule ndị a, nke bụ otu ihe ahụ. Nwere mmasị ịmara otu ule gafere?
Ọ na - amalite na ihuenyo, ebe a ga - apịa ma kpochapu ihuenyo nke Galaxy Note 10 Dị ka ọ dị n'ụdị ndị ọzọ n'ime ọkwa dị elu, ọ na - eji Gorilla Glass 6, ya mere ọ na-eguzogide nke ọma na ọ bụ ruo mgbe elu etoju mgbe ị pụrụ ịhụ ụfọdụ akara na gị na ihuenyo. Ọ bụghị ihe ijuanya na nke a.
Na-esonụ ule ekwentị ihuenyo Burns. Mgbe sekọnd ole na ole anyị nwere ike ịhụ na akara na-egosi na ihuenyo nke ngwaọrụ ahụ, mana na ọ ga-emecha kpochapụ ọzọ. Yabụ enweghị nsogbu na nke a, na-ekwe ka ngwaọrụ a rụọ ọrụ nke ọma.
N'ikpeazụ, ọ bụ oge iji gbanye Galaxy Note 10. Ọ ga-ekwe omume ịmata ma ekwentị ahụ na-anwale ule a ma ọ bụ. Anyị nwere ike ịhụ na ọ na-esiri ike ịgbagọ ekwentị, nke na-eme ka o doo anya na ọ bụ ngwaọrụ siri ike. Ebe obu na aghaghi iji otutu ike iji nwee ike ime ihe. Yabụ na ọ bụ nkọwa dị mkpa.
Dabere na ule nsogbu nrụgide JerryRig, anyị nwere ike ikwu nke ahụ ihe ngosi 10 a Galaxy gafere ya na ndetu. Yabụ, ọ bụrụ na ị na-eche echiche ịzụrụ njedebe nke akara Korea, ị ga-amara na ọ bụ ụdị nke na-eguzogide ọgwụ n'echiche a. Ozi ọma maka ndị nwere mmasị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Ihe ngosi 10 dị na Galaxy na-anwale ule ntachi obi kachasị ama
Ekwentị Huawei na HarmonyOS agaghị abata n’afọ a
Lenovo A6 Rịba ama: nke a bụ etiti etiti na-esote nke egosiri na onyonyo ya